Taxi-be nifanenjika : maty voahitsaky ny 192 ilay mpitondra bisikileta | NewsMada
Taxi-be nifanenjika : maty voahitsaky ny 192 ilay mpitondra bisikileta
Maty ary nipotsaka, noraofina teo amin’ny arabe mihitsy ny atidohan’ity tovolahy iray 22 taona nitondra bisikileta, voadonan’ny taxi-be 192 teny Mandroseza, ny asabotsy teo, tamin’ny 3 ora tolakandro. Araka ny fanazavana avy eny an-toerana, nifanenjika ny taxi-be roa ka raha teo am-pisongonana ny iray ilay taxi-be iray no sendra ilay bisikileta. Tsy tafala ity farany, ka voadona ary notetezin’ny kodiarana ny lohany. Ilay taxi-be namoa-doza no nijanona fa ilay iray kosa nanohy ny lalany. Nitsoaka avy hatrany ny mpamily raha vao tafajanona. Nitangorona ny olona, nentin’ny tahotra ilay mpamily ka tsy hita ny nanjavonany. Fantatra fa omaly, vao nitolo-batana teny amin’ny polisy izy io.
Taxi-be iray ihany koa nifatratra teo amin’ny andrin-jiro teny Ampasika, ny asabotsy lasa teo. Mbola vokatry ny fandehanana mafy ihany koa izao. Tapaka mihitsy ilay andrin-jiro ary nidaraboka teo amin’ny arabe. Olona 12 no fantatra fa naratra tao amin’ity lozam-pifamoivoizana ity.
Nitovizan’ireo loza ireo ny fandehanana mafy sy ny tsy fanajan’ny mpamily ny hafa. Tahaka ilay nahafaty olona teny Sabotsy Namehana, ny zoma lasa teo ihany koa. Mampigadra ny mpamily ny tranga toy izao, ary tokony ampahalalana ampahibemaso ny sazy miandry ireny mpamily mahafaty olona ireny mba ho anatra ho an’ny hafa.